Ingoma eNtsha kaTaylor Swift ibalisa ibali lekhaya lakhe iRhode Island - Uyilo Lokuphefumlela
Sasha / WosaziwayoHomePhotos.com
Icwecwe elitsha likaTaylor Swift, Iintsomi , ikhutshwe namhlanje, kwaye sithe phithi yingoma enye ngokukodwa ebalisa ibali labaninimzi bangaphambili beSwift's Rhode Island, eyaziwa ngokuba yiHoliday House. Ingoma, enesihloko esithi The Great Great American Dynasty, isekwe kubomi bukaRebekah West Harkness (owaziwa njengo 'Betty'), umqambi kunye nophilanthropist owaseka uHarkness Ballet, kunye nomyeni wakhe, uWilliam Hale Bill Harkness, osapho lwabo lwasungula ioyile esemgangathweni. . USwift uthenge iWatch Hill, iRhode Island, indlu nge-17.75 yezigidi zeedola (ngekheshi, akukho ngaphantsi) emva ngo-2013, kwaye ukusukela oko wabamba uninzi-lwe-Instagrammed- Iqela lesine likaJulayi apho.
Nabani na ongaqhelananga ngokusondeleyo nobomi bukaBetty Harkness, ibhulorho yengoma enokuthi ikukhokele ekubeni eli libali eliyinyani labantu ababehlala kwindlu eyiSwift ngoku: 'Indlu yeholide ihleli ithe cwaka ulwandle / Mahala abafazi abanempambano, amadoda abo kunye nemikhwa emibi / Kwaye ke yathengwa ndim. '
Indlu yeholide yenye yeTaylor Swift ezininzi Amakhaya , kwaye ibandakanya i-11,000 yeenyawo zenyawo kwaye ihleli kwii-5.23 iihektare. Yakhiwa ngo-1930 kwaye inezinto zokulala ezisibhozo, izindlu zokuhlambela ezili-10.5, kunye nembono entle engaphambi kwamanzi. Ayisiyiyo kuphela indlu entle kusapho lakwaHarkness, nokuba: U-William Hale Harkness utat'omkhulu omncinci ngu-Henry Morrison Flagler, owathi, kunye noJohn D. Rockefeller, basungula i-Standard Oil. Elinye lamakhaya angaphambili kaFlagler ngoku liMyuziyam yaseFlagler ePalm Beach, eFlorida, indawo yemyuziyam yendlu yembali yamaxesha aBudala aqukethe amagumbi angama-75, kwaye ngokuqinisekileyo ngumthendeleko wamehlo.
Ubukhosi bokuGqibela baseMelika buvakala ngathi yinto ephuma kwinoveli ka-F. Kodwa phambi kwayo yonke le nto, uSwift ukhankanya enye, indlu ethobekileyo acinga ukuba uRebekah Harkness wayehlala kuyo ngaphambi komtshato wakhe noBill- 'Indlu yakhe yebhokisi yetyuwa elunxwemeni yasusa ingqondo yakhe eSt. isixeko kwaye kubhekiswa kwixesha elidlulileyo elinzima ngakumbi.
Ii-Anecdotes zobomi obutofotofo beeHarkness ziyavela kumazwi afana nokuphulukana nokubheja kumdlalo wekhadi kunye noDalí. Olu nxu lumano alucingelwanga, nokuba: ekufeni kukaRebekah Harkness, uthuthu lwakhe lwabekwa kwi-urn engama-250,000 eyenzelwe nguSalvador Dalí.
Iingxelo zembali yobomi bukaRebekah Harkness zihambelana nokukhumbula kukaSwift ukuba 'wayengumhlolokazi ongafanelekanga'-kuyacaca ukuba wayenolwalamano olubi kunye nabamelwane bakhe abaninzi, ababengakhange bajonge ukuthanda izinto njengokucoca iphuli nge-champagne okanye ukudaya ikati yommelwane. luhlaza, zombini izingqinisiso kwingoma kwaye, ngokwe Igazi eBlue, Incwadi kaCraig Unger malunga noRebekah Harkness, amabali ayinyani.
izipho kootata kwintombi
Ngaba ufuna amakhaya amahle ngakumbi? Sinokuninzi. Masikhe sihlale phezu kwabo kunye.
Kwingoma, uSwift upenda uHarkness njengegorha elingaqondakaliyo, ebuza imibuzo ngokugxothwa kwakhe 'njengomfazi ophambeneyo' kwaye endaweni yoko ebuza 'amadoda anemikhwa emibi,' kwaye nokuzimatanisa noHarkness xa etshintsha i-chorus 'kuye unexesha elimangalisayo lokumosha yonke into ' 'Mna unexesha elimangalisayo lokumosha yonke into 'kwindinyana yokugqibela yengoma. U-Swift wayenomdla ngoRebekah kangangokuba enye ingoma yaqhubeka Iintsomi Ubizwa ngokuba nguBetty, isalathiso esicacileyo segama likaRebekah Harkness.
Ngokubhekisele ngaphakathi kwiNdlu yeholide ngoku imvumi ingumnini wayo, sicinga ukuba iyafana nobuhle be-whimsical obonwa kumakhaya amaninzi e-Swift, njenge-Nashville, Tennessee, indlu eboniswe ngokupheleleyo kuxwebhu lwayo lweNetflix, Nkosazana Americana .
Utata osuka kwintombi yakhe
I-rose succulents iyathengiswa
umbala wepeyinti ongwevu ongathathi hlangothi